Momba anay - Boselan Tank Company Limited
(titanium alloy) vilia vita amin'ny vy vita amin'ny roa vita amin'ny enamel fivoriambe. Ity vokatra ity dia nahomby tamim-pahombiazana tamin'ny fisotro rano, ny fanodinana indostrialy, ny fanodinana biby fiompy ary ny fanjakàn'ny tanàna, ny fikorontanana, ny lefatefo ary ny saha hafa, ary niara-niasa tamin'ny tetikasa mba hamita USB. IC, UASB, CSTR sy ny dingam-pandehanana ary digester hafa, fahatanterahana tanteraka amin'ny fandaharam-pirenena sy ny fandehanana amin'ny tsena iraisam-pirenena.
1. Tabataba GFS: ny takelaka vy novidiana dia voatsindrona, niondrika, voatifitra voapoizina, namafy ary nanota.
2. Mpihazona entona membrane roa: ny lamba vita amin'ny PVC-Coated izay namboarina ho amin'ny habeny takiana amin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fihenan'ny manual, ary avy eo ny roa sosona vita amin'ny pvc-coated dia mifandray miaraka amin'ny milina famatorana mafana.
1. sokajy fandrafetana ny fenitry ny indostria, laharana fahatelo amin'ny indostria;
2. Orinasa lehibe any amin'ny faritany hebei;
4. Tatitra fanadinana momba ny fenitra momba ny fanadiovana ny fiarovana ara-pahadiovana ny fitaovana amin'ny rano anatiny sy fisotroana ary fitaovana fiarovana ho an'ny fandroana vita amin'ny enamel;
5. fanamarinan-trosa AAA;
6.AAA fanamarinana ny fanomezam-boninahitra ny fifanarahana sy ny fitandremana ny toky;
7. Ny fanamafisana ny famerenam-pamokarana fiarovana ambaratonga-3 orinasa (milina);
8. Famantarana ny risika sy ny fitantanana sy ny fitantanana olana.